Calaamadaha Lagu Ogaado Inaad Tahay Nin Gabadha Uu Jecelyahay Ay Bari Karto Hooyadeed - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Calaamadaha Lagu Ogaado Inaad Tahay Nin Gabadha Uu Jecelyahay Ay Bari Karto Hooyadeed
Waligaa ma isweydiisay haddii aad tahay nooca nin ay habboontahay in loosoo bandhigo ama la baro gabarta aad xiriirka laleedahay hooyadeed?
Waxaa jiraan calaamado tilmaamaya inaad tahay nooca nin haweeney ay usoo bandhigi karto ama bari karto hooyadeed.
Waa kuwaan calaamadaha hoos ka aqriso.
Haddii aad tahay nooca ragga sida wanaagsan u labista kadib fursadaas waad heshay, waxaa taas sabab u ah ma jirto gabar hooyadeed bari karta nin aanan si wanaagsan u labisneyn ama xagga labiska ka liita.
Si aad uga gudubto caqabadaha, waxaad u baahantahay inaad noqoto wiil gabadha tusiya jacayl. Haddii aad tahay wiil noocaas ah ma jirto cid kaa reebi karta gabartaas, maadaama ay iyada ku jeceshahay kuna rabto waxay taas keeneysaa in ammaantaada ay usii gudbiso hooyadeed kahor intaysan ku barin, sidaa darteed gabar waliba waxaa leh ninka ay jeceshahay oo ay iyadu rabto.
Dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan
Si aad u hanato qalbiga una soo jiidato kan hooyadeed, waxaad u baahantahay inaad sidoo kale si wanaagsan ula dhaqanto gabarteeda, waxaa intaas dheer in waalidiinta ay mar waliba rabaan xaqiijin ku saabsan in yarkaas uu si wanaagsan ula dhaqmi doono gabartooda. Ha noqon nin dhaqan xun oo noqo nin dhaqan iyo akhlaaq wanaagsan leh.